Amanyathelo ama-5 eNethiwekhi yokuNxibelelana kwabaSebenzi beNtengiso | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 12, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukudibana nomthengi namhlanje oqonda iziseko ze-Twitter, i-Facebook, i-LinkedIn, njl. Kwaye ndifuna ukubanika ingxelo ngayo isiqalo ukusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ngokufanelekileyo. Umthengi wayeyingcali yokuthengisa kwaye wayefuna ukuqala ukusebenzisa eli thuba kodwa wayengaqinisekanga ukuba uzokulinganisa njani iimfuno zakhe zomsebenzi ngelixa esenza isicwangciso-qhinga semidiya yoluntu.
Le yingxaki eqhelekileyo. Ukunxibelelana nabantu kwi-Intanethi akufani nokunxibelelana ngaphandle kweintanethi. Udibana nabantu, uchonge izihlanganisi, kwaye ufumane kwaye wakhe ubudlelwane nabashukumisayo kunye nethemba. Awunakho ukungena kumnyhadala wokuqala Wabavula-mvula kwaye wenze oku (Abenzi bemvula yi iqela lothungelwano lwengingqi Ukukhula okuqhumayo). Kuthatha ixesha, kufuna ukumba okuthile, kwaye ekugqibeleni kukhawuleze ukuqala ukwenza inzuzo kwinethiwekhi yakho. Oku kuyinyani kwi-Intanethi njengoko ikwi-intanethi.
Amanyathelo ama-5 okuSebenzisa ngempumelelo iNethiwekhi yeNtlalo kwiNtengiso yeDrive
Ngena kwi-Intanethi: Yakha eyakho LinkedIn profile, vula ifayile ye- Twitter akhawunti, kwaye ukuba ufuna ukukhawulezisa inkqubo (kwaye utyale ixesha elininzi), qalisa ukubhala ibhlog kwishishini lakho. Ukuba awunayo iblogi, khangela ezinye iiblogi onokufaka isandla kuzo.
Chonga izihlanganisi: Enye indlela ekhawulezayo yokufumana izihlanganisi kwiqela lakho kukujoyina inethiwekhi ekwi-Intanethi enje nge-LinkedIn. Kwi-Twitter, ungayenza le nto ukuphanda ii-hashtag kunye nokufumana abantu ngasemva kwezo tweets zeshishini. Izixhobo Advanced ezifana IsiRadian6 unokunceda apha!
Kwiibhlog, utshintsho lwamva nje kwiTechnorati lunokukunceda unciphise iithagethi zakho. Ukwenza ibhlog yokukhangela kwikota enjengeCRM inokubonelela ngoluhlu lweebhloko, ngokulandelelana! Yongeza oku kutya kumfundi wesondlo owuthandayo!
Yakha ubudlelwane: Nje ukuba uchonge izihlanganisi, qalisa ukongeza ixabiso kumxholo wabo ngokongeza igalelo elifanelekileyo kumagqabantshintshi kunye neetweets. Musa ukuzinyusa ngokwakho… ayingabo aba bantu ukuthenga iimveliso zakho, ngabo abaya kuthi intetho malunga neemveliso zakho kunye neenkonzo.
Tsala oku kulandelayo: Ngokufaka isandla kwincoko nakwigunya lokwakha kwishishini lakho- izihlanganisi ziya kuthetha ngawe kwaye abachaphazeli baya kuqala bakulandele. Isitshixo apha kukunika, ukunika, ukunika… awukwazi ukunika ngokwaneleyo. Ukuba ukhathazekile ngabantu abeba ulwazi lwakho kwaye balusebenzise ngaphandle kokukuhlawula… suku! Aba bantu ngekhe bakuhlawule, nangaliphi na ixesha. Abo ba babeya intlawulo ngabo basaya kuqhubeka.
Bonelela ngeNdlela yokuzibandakanya: Kulapho ibhlog yakho iluncedo ngokwenene! Ngoku ukuba unabantu, kufuneka ubabuyisele kwenye indawo ukuze benze ishishini nawe. Kwibhlog, inokuba yifowuni-yentshukumo kwibar esecaleni okanye kwifom yoqhakamshelwano. Nika amanye amaphepha obhaliso lokhuphelo okanye iiwebinars. Ukuba akukho enye into, nikezela iprofayile yakho ye-LinkedIn ukunxibelelana nabo. Nantoni na ogqiba kuyo, qiniseka ukuba kulula ukuyifumana… kokukhona kulula ukunxibelelana nawe, kokukhona abantu baya kwenza njalo.
Ukunxibelelana nabantu ekuveliseni ukuthengisa akukho nzima kodwa kungathatha ixesha elide. Kanye njengokubeka iinjongo zentengiso phantsi kwenani leefowuni ozenzayo, inani leentlanganiso oya kuzo kunye nenani lokuvalwa okwenzayo… qala ukubeka phantsi iinjongo ezithile kwinani labasebenzi obafumanayo, inani ulandela, unxibelelana, kwaye unegalelo. Nje ukuba umdlalo wakho uqhubeke, ivolontiya kwisithuba seendwendwe okanye unazo ezo zihlanganisi okanye iphembelele iposti yeendwendwe kwibhlog yakho. Abaphulaphuli bokuthengisa yindlela entle yokwandisa inethiwekhi yakho.
Njengoko uqhubeka nokusebenza kwinethiwekhi kunye nokwakha ubudlelwane kunye nezihlanganisi kunye nabaphembeleli, uya kuyifumana imbeko yabo kwaye uvule amathuba ongazange wazi ukuba akho. Ndithetha-thethana mihla le ngoku, ndithetha rhoqo, ndibhala incwadi kwaye ndineshishini elikhulayo- zonke zakhiwe kwisicwangciso esisebenzayo senethiwekhi yoluntu. Kuthathe iminyaka ukufika apha - kodwa bekufanelekile! Bambelela apho!
tags: intanethiiingcali zokuthengisaintengiso yemidiya yoluntuinethiwekhi yoluntuukuthengisa kwezentlalo
Gcina izithembiso zakho
Novemba 12, 2009 ngo-3: 03 PM
Ukuba ngumamkeli kade kwimidiya yoluntu olu lwazi lunokundivumela ukuba ndisebenze ngakumbi ngexesha endiceba ukulichitha ekuziqhubeleni phambili ndisiya phambili njengengcali enxulumene neendaba zosasazo. Enkosi ngokuqonda uDoug.
Novemba 12, 2009 ngo-3: 33 PM
Wenza umsebenzi olungileyo wokuqaqambisa olo lwakhiwo lobudlelwane isesona sakhono sokusebenza sentengiso. Nangona kunjalo, ezinye zeendlela zitshintshile okanye zaphuculwa.
Ndicinga ukuba abantu baphoswa lithuba lokwenyani xa bethoba imidiya yoluntu njengendlela yokuchonga ithuba kunye nokukhawulezisa isivumelwano sokwenza ubudlelwane.
Ukukhulisa uthungelwano lweqabane elomeleleyo lokudlulisela kunokuba nefuthe elingaphezulu kwishishini lakho kunayo nayiphi na into oyenzayo kulo nyaka. Sebenzisa izixhobo zasimahla ezinje ngeReferrals-In.com yokunyusa i-LinkedIn yokukhulisa uthungelwano lweqabane lakho lokudlulisela.